सर्वोच्चको फैसलापछि कांग्रेस र जसपाले के गर्ला ? Nepalpatra सर्वोच्चको फैसलापछि कांग्रेस र जसपाले के गर्ला ?
काठमाडौं । सम्भावित राजनीतिक दृश्यलाई नियाल्दै नेकपाका दुवै समूहले यतिबेला कांग्रेसको भूमिका निर्णायक हुने दुवै पक्षको ठम्याइ छ । कांग्रेसले अहिले निर्वाह गरेको भूमिकाले पनि नेकपाका दुवै पक्षलाई इन्गेज गराएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति पूर्ण भरोसा छ ।
देउवा निर्वाचनको पक्षमा खुलेर लागेका छन् तर पौडेल, सिटौलासहितका नेताहरु प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको अडानमा छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भने पनि पुनः स्थापना वा निर्वाचन भन्नेमा कांग्रेसमा एउटै दृष्टिकोण छैन । जसले नेकपाका दुवै समूहलाई कांग्रेस आफूतिरै भएको अनुभूति दिइरहेको छ । कांग्रेसकै जस्तै दृश्य पछिल्लोपटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा पनि देखिएको छ ।
नेकपाभित्र ठुलो चलखेल : विमानस्थलबाट काठमाडौँ उत्रने बित्तिकै एक सांसदलाई महेश बस्नेतले होटल छिराएपछि
ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्याइएको बजेट दुरुपयोग गर्दै जनप्रतिनिधि भ्रमणमा व्यस्त
नेकपामा आफ्नो समूहमा सांसद् तान्न यतिठुलो चलखेल
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि शिक्षामन्त्री ‘सक्रिय’ : नियम विपरित निजी कलेजहरुलाई धमाधम सम्बन्धन बाड्दै